Voasambotra ny miaramila teny Analakely: nitonona ho serzà sefo ilay tovolahy, hay mpisandoka | NewsMada
Natolotra ny fampanoavana, omaly ary naiditra am-ponja avy hatrany, ny tovolahy nisandoka ho miaramila, voasambotr’ireo miaramila mandeha an-tongotra manao fisafoana, teny Analakely, ny alin’ny alarobia teo. Nitonona ho «sergent-chef » izy, hay sandoka rehefa nohamarinina.
Nifanehatra tamin’ireo miaramila mpanao fisafoana amin’ny alina teny Analakely ity miaramila sandoka, monina eny Ankorondrano, ity tamin’io fotoana io. Araka ny fanazavan’ireo miaramila mpanao fisafoana, avy nanao fisafoana teny amin’ny faritra Isotry sy ny manodidina ireo miaramila ireo ny alarobia alina tamin’ny 9 ora sy 30 mn ka raha iny nandalo teo Analakely iny izy ireo, nahita tovolahy iray nanao fanamiana miaramila. Nahatsikaritra anefa ireo miaramila mpanao fisafoana fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fipetraky ny galona eny aminy, hatramin’ny fanamiana nanaovany koa aza. Nandray fepetra nanatona azy ireo miaramila ireo. Nitonona ho miaramila avy hatrany ilay tovolahy sady nanao fampahafantarana ny tenany izy ary nilaza fa serzà sefo ny galonany. Mody nanao jery atrika toy ireny tena miaramila ireny mihitsy ity miaramila sandoka ity, hay sarimihetsika fotsiny ny ao ambadik’izany rehetra izany. Nandritra ny fanadihadiana savaranonando nataon’ireo miaramila mpanao fisafoana anefa, fantatra fa mpisandoka fa tsy miaramila akory ity tovolahy ity. Nosamborina avy hatrany izy ka natolotr’ireo miaramila ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany (CSP1) voalohany Analakely hanohizana ny famotorana azy.
Entiny hanindriana rehefa mivoaka alina ireo fanamiana…
Niroso tamin’ny famotorana azy ny polisy eo anivon’ny CSP1 ka nolazainy nandritra izany fa avy any Vangaindrano izy, miaramila efa nodimandry ny rainy ary fanamian’io rainy io ireto anaovany miaraka amin’ny galona ireto. Nilaza izy fa isaky ny mivoaka mandeha misotrosotro amin’ny alina eny amin’iny faritra Analakely iny no manao io fanamian’ny rainy io izy mba hanindriana mandritra ny fivoahana amin’ny alina. Fantatra, nandritra ny famotorana azy, koa fa efa nifoka rongony izy teo amin’ny faha-25 taony ary izao nitohy tamin’ny fisandohana ho miaramila izao indray. Niaiky ny heloka vitany izy noho izao fisandohana nataony izao. Tsikaritra, tato ho ato, fa miparitaka mihitsy ireny fanamiana mitovy loko amin’ny an’ny mpitandro filaminana ireny. Tsy hay intsony ny manavaka ny mpitandro filaminana sy ny tsy mpitandro filaminana. Hita mihantonantona eny ambony tsivalambin’ireo mpivaro-damba ireo fanamiana miloko maramara. Manginy fotsiny ireo mpiambina sivily manao ireny fanamiana mitovy amin’ny zandarin’ny GSis ireny. Nahazo alalana sy/na vono vorona (araka ny fomba fiteny). Antony iray mampirongatra ny tsy fandriampahalemana izany ka tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky ihany ny momba ny fanamian’ireny mpiambina sivily sy ireny fanamiana mitovy loko amin’ny mpitandro filaminana amidin’ny mpivarotra ireny.